» लायन्स क्लव अफ बुटवल युथको अध्यक्षमा अधिकारी
लायन्स क्लव अफ बुटवल युथको अध्यक्षमा अधिकारी
११ बैशाख २०७८, शनिबार १३:२९
बुटवल । लायन्स क्लव अफ बुटवल युथमा आगामी वर्षको अध्यक्षमा हरिकृष्ण अधिकारीलाई चयन गरिएको छ । शुक्रबार साँझ बुटवलमा भएको अधिवेशनले वर्ष ०२१–०२२ को लागि अध्यक्षमा अधिकारी सहित सिंगो टिम सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो ।
त्यस्तैगरी क्लवको प्रथम उपाध्यक्षमा हरिबिक्रम कुँवर, द्वितीय उपाध्यक्षमा विष्णुप्रसाद काफ्ले, तृतीय उपाध्यक्षमा सुरेश केसी, सचिवमा रबिन कार्की, कोषाध्यक्षमा अब्दुल करामत, सहसचिवमा मनमोहन गुभाजु, र सहकोषाध्यक्षमा प्रशान्त भट्टराईलाई चयन गरिएको हो ।
त्यस्तैगरी क्लवको जनसम्पर्क अधिकारीमा नियामत अलि तथा डाईरेक्टरहरुमा मोति काफ्ले, ध्रुव भट्टराई, डा. समित उल्लाह, कृष्ण रिमाल, मनोज कानु, चंखा पुन, सलामवक्स मिया र दिलिप गौचनलाई चयन गरिएको क्लवका निवर्तमान अध्यक्ष तथा निर्वाचन आयुक्त दिपकप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो ।
क्लवका संस्थापक अध्यक्ष जाकिर हुसेनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरु जमिल खान, भेषराज गैरे, अशोक गुरुङ् लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कांग्रेस रुपन्देहीको पार्टी कार्यालय स्वास्थ्यकर्मीलाई
बुटवल उपमहानगरद्धारा अक्सिजन बैंक सेवा सुरु
समाजसेवी स्व. भुवानी प्रसाद रिजालको सातौ दिनको पुन्य तिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न
निषेधाज्ञाको समयमा कालोवजारी गर्ने ,बजारमा कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्नेहरुको निगरानीमा मञ्च